Ahoana no fiantraikan'ny fandehan'ny fotoana amin'ny Apple Watch? | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Apple Watch, iPad
Ny fahazoana ny taranaka voalohany amin'ny fitaovana dia mitaky risika ihany rehefa manatona ny tsy fantatra. Ny Apple Watch dia feno zavatra tsy fantatra, ary na dia mitovy hevitra amin'ny kalitao aza ny Apple dia mbola zavatra iray izay mampikaikaika ny mpividy ny famantarananao io. Raha ny marina dia maro aminareo no nieritreritra ny hividy ny maodely mora indrindra ary hanao fampiasam-bola lehibe kokoa any aoriana, amin'ny taranaka mandimby.
Na dia tsy fantatsika aza amin'izao fotoana izao ny fihetsiky ny batterie, ny efijery, ny bokotra, sns., Dia azontsika atao ny mahafantatra ny fomba fitondran-tenan'ny maodely samihafa an'ny Apple Watch miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana sy ny fampiasana isan'andro. Apple dia tsy nahita vovo-basy, namorona famantaranandro misy fitaovana izay efa nampiasaina tamin'ny sehatry ny fiambenana nandritra ny am-polony taona maro, ka fantatra tsara ny fihetsik'ireo fitaovana ireo. Efa hitantsika ny fahasamihafana misy eo Kristaly ion-X ary ny kristaly safira. Tao amin'ny iMore dia nanao fandalinana tsara momba ireo fitaovana ho hitanao izy ireo ny fahasamihafana misy eo amin'ny alimo, vy ary volamena, ary koa ny loko isan-karazany.
1 Apple Watch Sport
3 Apple Watch Space Mainty
4 Apple Watch Edition
Ny maodely mora vidy indrindra sy ny safidy indrindra ho an'ny vidiny ary satria ny endriny dia mitovy amin'ny maodely hafa. Tsy ny aliminioma no fitaovana tsara indrindra hanaovana famantaranandro, raha ny marina dia tsy hahita maodely aliminioma marobe amin'ny marika hafa ianao, satria fitaovana malefaka sy malefaka io. Fa raha misy orinasa mahazatra an'ity fitaovana ity sy manana traikefa amin'ny fanamboarana fitaovana aluminium dia tsy isalasalana fa Apple.
Ekeko fa ny fanapahan-kevitro manokana hividy ny maodely vy dia miankina amin'ny ny tsy fahatokisana ny aliminioma dia mahatonga ahy amin'ny famataranandro. Amin'ny lafiny iray dia misy ny fiovana alohan'ny fikapohana, amin'ny lafiny iray kosa ny fisehoan'ny matotra omen'ny anodizing azy ary miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia mety hisy fiantraikany amin'ny kapoka sy ny fifandirana. Na izany aza, Apple dia afaka nitady vahaolana tonga lafatra mba hampihenana ny olana faran'izay farany.
Voalohany, ho an'ny olana fanoherana ny hatairana, Apple dia mampiasa firaka aliminioma avo kokoa noho ilay natolotra ho an'ny famantaranandro. Raha mahazatra ny firaka "6000" dia ampy amin'ny famataran'ora iray, Apple dia nisafidy ny hampiasa firaka "7000", avo roa heny noho ny tarehimarika akaiky ny vy sasany, raha ny marina, amin'ny teôria dia matanjaka kokoa noho ilay maody vy izy io. Izy io koa dia mampiasa dingana anodizing (Type III) tsy mitovy amin'ny mahazatra (Type II), izay mahatonga io sosona manify manarona ny alimo io hanohitra tsara kokoa. Fa aza diso, ny anodizing dia manify eo amin'ny sisiny, ary eo ny fandehan'ny fotoana dia tsy hitsahatra amin'ny Apple Watch Sport, indrindra amin'ny maodely mainty. Ny satro-boninahitra, miaraka amin'ireo lalan-drivotra ireo hahafahany mitantana azy tsara kokoa, angamba no voalohany iharan'ny fahasimbana.
Na eo aza ny zava-bitan'i Apple mba hanatsarana ny aliminioma an'ny Ny maodelin'ny Sport azy dia, tsy isalasalana, fa maodely handrava ny ratsy indrindra rehefa mandeha ny fotoana, satria ny vera Ion-X tsy dia mahatohitra azy dia tsy maintsy ampiana an'ity metaly ity izay maivana kokoa nefa miteraka fatiantoka hafa, indrindra ny fanalefahana azy.
Ny vy ampiasain'i Apple no be mpampiasa indrindra amin'ny indostrian'ny famantaranandro avo lenta. Raha ny tena manokana dia ny firaka 316L izy, ary na dia Rolex (ohatra) aza dia mampiasa ny firaka 904L amin'ny maodeliny sasany, amin'ny teôlôjia mahazaka kokoa, amin'ny fampiharana isan'andro dia tsy ho voamariky ny fahasamihafana. Mampitombo ny fanoherana ny hatairana koa ny faritra voalamina, ary ny famolavolana ny boaty famantaranandro mihitsy, boribory sy tsy misy sisiny, dia hanampy amin'ny fanaovana tsikombakomba ny fotoana kokoa.
Azo kosehina tsy misy olana ny vy amin'ny alàlan'ny serivisy teknikan'ny Apple (amin'ny teôria) na amin'ny mpanao famantaranandro za-draharaha. Raha ny tena izy dia zavatra vita tsy miovaova amin'ny famantaranandro rehetra amin'ny fiovan'ny bateria na amin'ny fanamboarana mekanika. Ny tsara kokoa dia ny fanaovana azy amin'ny famatahana famataranandro, mba tsy hanimba ny sisin'ny singa hafa toy ny bokotra na ny satro-boninahitra, fa azo atao koa amin'ny famantaranandro miangona amin'ny alàlan'ny fandraisana fepetra fiarovana mety.
Ny fanapahan-kevitr'i Apple ataovy vita amin'ny borosy vita ny kofehy vy, toy izay ny fandefasana ny fonosana famantaranandro, fa zavatra izay matetika no misy azy. Hahita fehy famantaranandro avo lenta vitsivitsy ianao, satria mamirapiratra loatra ilay izy. Ho fanampin'izay, ny fehy dia ilay iray izay mandray ny ankamaroan'ny herisetra, ary ny farany vita borosy dia mandray azy tsara kokoa noho ilay voadinika.
Apple Watch Space Mainty
Ny maodely tsara tarehy indrindra ho an'ny maro, fa angamba ny marefo indrindra eo anilan'ny mitovy amin'ny aliminioma azy. Na dia mitovy kalitao amin'ny maodely mahazatra aza ny vy ao anatiny, tena hatsarana ity Space Black Apple Watch ity fa ny fandrakofana ao anatiny dia mahatonga azy ho kandidà handrombaka medaly amin'ilay "Appel Watch izay hahatratra ny taona ratsy indrindra". Apple dia nampiasa teknolojia tena mandroso ho an'ity firakotra ity (DLC, Diamond Like Carbon) fa amin'ny fampiharana dia tokony ho fantatrao fa ny fahavoazana mahazo azy dia ho hita mandritra ny kilaometatra maro noho ny fifanoherany amin'ny loko mainty, ary tsy ho azo ovaina ihany koa io. Aza adino ny manome azy "fandroana mainty" nandritra ny taona maro, satria amin'ny fampiharana dia lafo kokoa noho ny famantaranandro ianao.
Entana lafo vidy mihoatra ny fitaovana teknolojia. Betsaka ny vita tamin'ny firavaka volamena amin'ity Apple Watch ity, milaza fa "namorona" firaka vaovao i Apple izay hahatonga azy mahatohitra kokoa. Tena volamena karat 18 io, izany hoe, volamena 75% farafaharatsiny. Ny 25% ambiny dia fitaovana hanamafisana azy, hanome loko azy, na hanamorana ny asa vy. Ny volamena dia mizara amin'ny aliminioma fa vy malefaka izy io, ka mora simba. Saingy mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny aliminioma, mpanao voalohany ny endrika mifarana amin'ny tovana -ar ary ny vokatra farany dia ho lavorary.
Olana miandry izay hitranga amin'ireo fehikibo. Mbola tsy fantatsika raha azo esorina mora foana ny fehin-kibo (izay volamena). Toy izao no tokony hatao, satria ny fehy vita amin'ny hoditra dia manana fiainana antonony 2 na 3 taona, miankina amin'ny fampiasana sy ny fikarakaran'ny tompony. Mety hoe naka ny tadiny taloha i Apple ary nanolotra fehin-kibo vaovao namboarina niaraka taminy. Heveriko fa na dia ny olona nandany mihoatra ny 10.000 amin'ny famantaranandro aza dia hieritreritra fa tsara ny manary fehin-kibo volamena fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Inona no ho fiantraikan'ny fampiasana sy fandehan'ny fotoana eo amin'ny maodely Apple Watch?
Rul dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, na dia raha ny hany zavatra ataonao dia ny mandika avy amin'ny imore.com dia azonao atao ny mitanisa ny loharano farafaharatsiny ...
Valiny tamin'i Rul
Lehilahy, milaza fa "ny ataonao rehetra dia ny mandika" dia miteny betsaka. Ny vaovao nalaiko avy teo, saingy nanao ny lahatsoratro aho, tsy fandikan-teny izany.
Na izany na tsy izany, marina izany, ary afaka nianiana aho fa nanao izany ary koa amin'ny andininy voalohany, saingy miharihary fa tsy nanao izany aho. Manitsy aho.
Ankasitrahana ny fahatsoram-po, amin'ny lafiny iray dia miala tsiny aho milaza ny "zavatra tokana", hita miharihary fa hafa ny fomba nanoratana azy. Efa ela aho no nanaraka anao teto amin'ity pejy ity sy tamin'ny iphone, ary ho an'ireo izay manaraka tranokala hafa dia manampy ny mahafantatra raha hahita fampahalalana vaovao isika na tsia alohan'ny hamakiana ny lahatsoratra iray manontolo.
Ary manampy anay fa rehefa mahita zavatra tsy mety dia lazao anay. Miarahaba. 😉
Ny charger Apple Watch dia manohana ny famahana finday